Global Voices teny Malagasy » Ny t-shirt hafahafa nanaovan’ilay mpilalao baseball malaza misotro ronono Ichiro Suzuki no vao maika nankafizan’ny mpankafy azy bebe kokoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Avrily 2019 5:57 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fanatanjahantena, Hehy, Mediam-bahoaka
“Mahazo mitsikitsiky malalaka.” Malaza amin'ny fananany t-shirt hafahafa maro i Ichiro Suzuki, ilay mpilalao baseball malaza efa misotro ronono. Sary niparitaka betsaka tao amin'ny tambajotra sosialy .
Ny Alakamisy 21 Martsa, nanambara ny fisotroan-dronony teo anoloan'ny mpankafy azy i Ichiro Suzuki , ilay mpanipy baolina baseball malaza indrindra teo amin'ny tantara nandritra ny lalao fifaninanan'ny Ligy Lehibe ho an'ny Baseball (MLB) tao amin'ny kianjaben'i Tokyo.
Niseho indray ny tenirohy #イチローＴシャツ  (” T-Shirt Ichiro”) fironana tao amin'ny Twitter ny ampitson'ilay andro nanambaràn'i Suzuki ny fisotroan-drononony.
Ankehitriny 45 taona i Suzuki, fantatra amin'ny fanampin'anarany fotsiny hoe “Ichiro” ho an'ireo mpankafy any Japana sy manerana izao tontolo izao. Nanomboka ny lalaony matihanina ho an'ny ORIX Buffaloes tao Kobe izy talohan'ny nilalaovany ho an'ny Seattle Mariners ao amin'ny ligy lehibe Amerikana. Nilalao fotoana fohy niaraka tamin'ny New York Yankees sy ny Miami Marlins i Suzuki talohan'ny niverenany tany Seattle mba hamaranany ny lalan'asany. Nandritra izany dia niha-nalaza tamin'ny nandaozany ny zava-drehetra tamin'ny fiainany izy  afa-tsy ny baseball  .
Efa nahatontosa zava-bita tsara indrindra maro  i Suzuki noho ny fifantohany, ny asany mafy sy ny talentany voajanahary, anisan'izany ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny American Major League Baseball (MLB) andiany tokana ho an'ny tifitra tsara indrindra, ary ny andiany folo misesy ho an'ny tifitra miisa 200, ny tifitra mahitsy lava indrindra  tsy mbola nataon'ny mpilalao baseball iray hafa teo amin'ny tantara.
Nanangona andianà sioka  maromaro izay mamariparitra ny ankamaroan'ireo t-shirt tsy mahazatra nanaovan'i Suzuki nandritra ny taona maro ilay mpisera Twitter, Tatsuno Shinji.
Nanontaniana  mikasika ny dikan'ny t-shirts nanaovany i Echiro nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nanambarany ny fisotroan-drononony :
Azo jerena ao amin'ny tranokalam-bilaogy Naver Matome , ao amin'ny Twitter  ary ao amin'ny bilaogy  isankarazany ny ankamaroan'ny t-shirts tsy manam-paharoa mahavariana anaovan'i Suzuki .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/16/136492/
 nandaozany ny zava-drehetra tamin'ny fiainany izy: http://www.espn.com/espn/feature/story/_/id/22624561/ichiro-suzuki-return-seattle-mariners-resolve-internal-battle
 nahatontosa zava-bita tsara indrindra maro: https://www.baseball-reference.com/players/s/suzukic01.shtml
 tifitra mahitsy lava indrindra: https://web.archive.org/web/20140810054941/http://sports.espn.go.com/mlb/news/story?id=2417408
 andianà sioka: https://twitter.com/shinjitatsuno/status/1109197253334331392